Downloads 16 671
Munyori: Ross McLennan
Download Kune FSX & Steam Edition & P3D v1. * v2 v3 v4 kuongororwa #3D Virtual Cockpit
rongedza ino ine ndege uye ndege urongwa vaida kuudza nyaya 617 dzechikwata RAF Dambuster kurwisa Moehne naEdheri madhamu 16 - 17th May 1943.
Uchawana kutiza Zvirongwa zviri Start Muterere - Chirongwa All - Rikoooo Wedzerai-wanda - Avro Lancaster TP464 db AJC v6 FSX & P3D - FlightSimulatorFiles
The Avro Lancaster aiva mana engined bhomba the Second World War, ikabereka pakutanga nokuda Avro nokuda Royal Air Force. Akapinda basa 1942, yakanga yakavakwa kupfuura 7000 makopi uye aiva Handley Page vomuHalifax, chikuru bhomba of Royal Air Force munguva iyi. It akazivikanwa ayo usiku kubhomba.
Shoko kubva munyori:
Izvi kusunungurwa kufanana yapfuura nyaya zvichiitirwa kuudza nyaya 617 Sqd Dambuster kurwisa Ruhr madhamu muGermany 16-17 May 1943. Rinoita ichi kuburikidza akapa ndege uye vachishandisa imwe vaikwanisa Dambuster Lancaster ndege kubva Plane-Design. In Shanduro iyi inoenda madhamu ari rakanyatsorurama nokuti pane
muudzame rakabudiswa mumabhuku uye padandemutande kupfuura paiva adzoka 2003. Kune vachiri kurwisana ari rakabudiswa mashoko. It zvinoenderana iyo bhuku ukaverenga uye kuti vashandise.
Zvechokwadi kana iwe dzibhururuke munzira iyo zvikwata akaita vadzoka 1943 uchava nokunzwisisa kwazvo chete zvakaoma kuti basa raiva.
Akagara ari Vatyairi kuchigaro "Just Jane" muUK uye vakashandisa chidhiraivho ndine kunzwisisa zviri nani zviri Lancaster uye pashure kushanya kwangu kuna yeEdheri Dam kunzwisisa chaiye enyika ivo nendege pamusoro.
Unyanzvi Kunoshamisa pakati zvokuchenesa hazvigoni zvakarurama simulated ari Simulator asi iwe unofanira zvirokwazvo kuuya kubva Project iyi ine nani pfungwa chii shoko "Dambuster" zvinoreva uye sei zvinobudirira ari Lancaster akanga sezvo chokushandisa inoshandiswa kuendesa anobudirira mugumisiro .
Downloads: 6 663